Xisbiga maamula Ethiopia ee EPRDF oo jawaab siiyey madaxweyne CABDI ILEY - Caasimada Online
Home Warar Xisbiga maamula Ethiopia ee EPRDF oo jawaab siiyey madaxweyne CABDI ILEY
Xisbiga maamula Ethiopia ee EPRDF oo jawaab siiyey madaxweyne CABDI ILEY
Haddaba BBC-da laanteeda Afka Amxaariga ayaa waxaa waraysi Gudoomiye ku xigeenka xisbiga TPLF ahna madaxa xafiiska Xaruunta dhexe ee EPRDF marwo Fetlawarqi G/Igzaaber, waxayna tiri.
Sidoo kale waxaa nala hadlay Mr Saadaat madaxa arrimaha Isgaarsiinta ee Xafiiska Xaruunta Dhexe ee EPRDF, wuxuuna yiri “Warbixinta madaxweyne Cabdi waan dhageystay. Mudane Cabdi shirarka wax cabasha ah oo uu si rasmi ah uga jeediyey malaha arrintaa waxba kama ogin. Madaxda sare ee dowladda inuu cabashadiisa gaarsiiyey wey dhici kartaa. Ka xafiis ahaan laakiin arrintaa waxba kama ogin.”